‘एमाले अझै बलियो छ’ भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिमा शेखर, गगन र विश्वप्रकाशको आपत्ति – Karnalikhabar
‘एमाले अझै बलियो छ’ भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिमा शेखर, गगन र विश्वप्रकाशको आपत्ति
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भएको छ।
देउवाले ‘एमाले अझै बलियो छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनावको मुखमा कार्यकर्ताको मनोबल खस्किनेगरी सभापति बोलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
देउवा गत शनिबार ‘अझै ओलीजीको पार्टी कमजोर छ भन्ने झुटा कुरा हो। अझै ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। केही पनि होइन, ओली र माओवादी एमाले फुटिहाले हामी जित्छौं भनेर आश गरेर नबसे हुन्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यो अभिव्यक्तिमा नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। नेता कोइरालाले प्रश्न गरे, ‘एमाले धेरै बलियो छ भनेर हाम्रो सभापतिजीले भनेपछि हाम्रो कार्यकर्ताले कुन मनोबलले काम गर्छन्?’
महामन्त्री थापाले भने, ‘चुनावमा हामी कमजोर छौं भन्ने म्यासेज सभापतिजीले दिन थाल्नुभएको छ। त्यो पनि गलत ढंगले आइरहेको छ।’
यही कारणले प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा बसेर रोल्पाबाट हामी एक्लै जित्छौं, हामीलाई गठबन्धन चाहिएको छैन तर केही केही दललाई चाहिएको कारणले गठबन्धन गरिदिनुपरेको छ भनेर बोलेको उनको भनाइ छ। ‘हामी यसरी कमजोर रुपमा प्रस्तुत हुने र उनीहरुले हामीलाई नै कमजोर देखाउने हो भने हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? यसले राम्रो गरिराखेको छैन,’ उनले भने।
अर्का महामन्त्री शर्माले थपे, ‘सभापतिजीले एमाले बलियो छ भन्न हुन्थेन। त्यो गलत भयो। तर उहाँले तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरेर हामी त्यस्तो धेरै कमजोर होइन सामान्य कमजोरमात्रै हो भनेको भए तथ्यसंगत हुन्थ्यो।’
शर्माले यो तथ्य विश्लेषण गर्दा कांग्रेस ठूलो दल बन्न गठबन्धन गर्नैपर्ने देखाएको जिकिर गरे। ‘कम्युनिस्ट एक हुन नदिने र कोही कोहीलाई साथ लिएर जाने हाम्रो विकल्प हो,’ उनले भने।
नेता कोइरालाले केन्द्रले लाद्ने गठबन्धन सफल नहुने बताए। ‘यो बेला स्थानीय तहबाट गरे त ठिकै थियो। तर अहिले नेकाको विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर गरिने गठबन्धन स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो गठबन्धनमात्रै गर्छौं भनेर मात्र भएन। कार्यकर्ता जिताउन लागेका छन्। हामीले आफ्ना रुष्ट कार्यकर्तालाई सम्बोधन नगरी बाहिर मिल्ने भनेरमात्रै कसरी परिणाम राम्रो आउँछ?’
गठबन्धन गर्नुको औचित्य सही ढंगले पुष्टि भइनसकेको भन्दै उनले किन गर्ने, के का लागि गर्ने, को सँग गर्ने भनेर नै क्लियर नभएको बताए।
उनले चितवनमा आजसम्म चुनाव जितेको थाहा छैन भनेका सभापति देउवालाई जवाफ दिँदै भने, ‘चितवनमा पनि चुनावै जितेको छैन भन्ने सभापतिजीले तर्क राख्नुभएको थियो। तर त्यसो होइन। ०४८ सालबाहेक ०५१, ०५६, ०६० मा हामीले जितेकै हो।’
नेताहरुले आफ्नो आलोचना गरेपछि सभापति देउवाले पनि जवाफ दिए। ‘कम्युनिस्ट फुटेका छन् जितिहाल्छौं भन्ने लागेको छ साथीहरुलाई। म त गठबन्धनको पक्षमा पनि थिइन्। साथीहरुले नै यहाँसम्म ल्याए। म प्रधानमन्त्री हुन खोजेको होइन। तपाईहरुले नै होइन मलाई प्रधानमन्त्री बन्न दबाब दिएको ? हाम्रो पार्टीमा एउटा गम्भीर रोग छ अन्तर्घातको। यो समाप्त भए गठबन्धन गर्नुपर्दैन। नत्र त जित्न पर्‍यो नि,’ उनले भने।
देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीलाई अनुशासन कायम गराउन, अन्तर्घात गर्नेलाई कारवाही गर्न र पार्टीलाई नचिढ्याउन आग्रह गरे।
अघिल्लो - लाखका योजना माग्न सिंहदरबारमा जनप्रतिनिधि
केरुङ-काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा - पछिल्लो